Xakamaynta Ciyaarta, Koontaroolaha Ps4, Xakamaynta Bedelka - Mcldosly
Diirada saar Adeegga Baabuurta
5 sano ee Taariikhda iyo Socodka, Ku dadaalida hagaajinta qaab nololeedka ciyaaraha
5tii sano ee la soo dhaafay ee ciyaaraha MCLDOSLY waxa ay abuuraysay qalab ciyaaraha fiidyaha ah oo heerkoodu sareeyo oo si toos ah u keenaya qalabkaas iyo maamulayaasha ciyaartoyga, horyaalada iyo jumladlayaasha ugu waaweyn oo had iyo jeer waxay ku dadaalaan inay bixiyaan kantaroolayaasha halyeeyada ugu fiican oo ay horumariyaan qaab nololeedka ciyaaraha madadaalada ciyaaraha fiidiyowga
Agabka ciyaarta ps5 cusub oo kulul
jumlo Gamepad loogu talagalay kontoroolka ciyaarta pc Dhaqdhaqaaqa Gamepad ee loogu talagalay joystick PC ...
Android smart joystick taleefanka gacanta bluetooth joystick wireless gamepad
Xakamaynta Wireless Controller PS4 ee Playstation 4, Game Controllers Compat
Xakameeyaha V2 Wireless Bluetooth oo leh Cable USB ah oo loogu talagalay Sony Playstation 4 Compat
Xakamaynta ciyaarta PS4 ee PS4 (Korantada guduudan), Compuve Vibration Comp...
Xakamaynta ciyaarta PS4 ee PS4 Wireless Gamepad ee PS4PS4 ProPC iyo ...
Waxaan sidoo kale siinaa faa'iidooyin waaweyn dhammaan macaamiisheena, kuwa cusub iyo kuwa soo laabanayaba. Dareen xornimo inaad hubiso sababo badan oo aad ku noqonayso macmiilkayaga oo aad leedahay khibrad iibsi oo bilaa dhib ah.
Naqshada kicinta saxda ah iyo joysticks la riixi karo ayaa kaa dhigaya inaad ku raaxaysato khibrada konsole oo buuxda
soo dhawoow wixii su'aalo ah iyo mashruuca OEM iyo ODM.
Nofeembar 05, 2021
1. Bateriga waxaa lagu rakibay jeexdin dhexda iyadoo loo eegayo tirarka togan iyo kuwa taban. Ka dib marka la isku xiro, badhanka gacanta ayaa iftiimin doona; 2. Ku xidh USB-ga bilaa-waayirka gacanta ee sanduuqa oo bilow. Waxaad soo dejisan kartaa qaar ka mid ah ciyaaraha la mid ah lobby-ka ciyaarta, sida goobta ciyaarta, haddii th...
Waqtigu wuu duulaa. Todoba sano ka dib koontaroolihii ugu horeeyay ayaa soo baxay, kontorool aad u badan oo caan ah ayaa soo baxay-koontaroolihii asalka ahaa ee NES, nooca kontoroolka cas iyo cadaan ee Nintendo. Koontaroolahaan waxa laga yaabaa in aanu aqoon u lahayn ciyaartoyda qaar. Waxaan aaminsanahay in qof walba uusan noqon doonin qof aan aqoon lahayn ...
Talaabooyinka loogu xidho gacanta ciyaarta mobaylka iyo talefanka gacanta waa sidan soo socota: 1. Fur bluetooth interface ee talefanka gacanta, shid bluetooth-ka, talefanka gacanta waxa uu si toos ah u gelayaa xaaladda qalabka wax raadinta. Haddii nidaamka talefanka gacanta uusan si toos ah u raadin aaladda, y...
Oktoobar 22, 2021
1. Rog kontaroolaha si uu dhabarku kuugu soo jeedo. (2)/, Koontaroolaha ku yaal bartamaha midig ee hoose, waxaad ku arki doontaa istiikaro yar oo leh barcode. Calaamaddu waxay ku xigtaa Microsoft/Xbox 360 hologram. Ka saar summadan oo dul saar daloolka furka daboolan. 2. Fur furayaasha dhabarka...